Pôlitika : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Pôlitika : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Novambra 2018 à 03:49
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Desambra 2014 à 14:58 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Novambra 2018 à 03:49 (hanova) (esory)
Ny teny hoe '''politika''' dia avy amin'ny [[fiteny grika]] hoe ''politikè'' ("''siansa siansan'ny raharahan-tanàna"''). Teny mitovy dika amin'ny fandrindràna ny tanàna ny politrikapolitika. Ny tanàna resahina eto dia tanàna [[mizaka tena]] grika taloha.
Ny politika dia ny fomban'ny olona miaina ao amin'ny vondrona hanapa-kevitra. Ny politika dia, ny fanaovana fifanarahana eo amin'ny olona mba hahafahany miara-miaina eo amin'ny vondrona toy ny foko, tanàna, na firenena. Ao amin'ny vondrona lehibe, toy ny tanyfirenena, ny olona sasany dia mety ho lany fotoana manao fifanarahana toa izany. Ireo olona ireo no antsoina hoe mpanao politika. Ny mpanao politika, ary indraindray ny olona hafa, dia mety miaraka mba hanangana ny fitondram-panjakana. Ny fandinihana ny politika ao amin'ny oniversite no atao hoe siansa ara-politika, fiararanafianarana ara-politika, na ny fitantanam-bahoaka.
Eo amin'ny fiainana andavanandro, ny teny hoe "''politika"'' dia manondro ny fomba hitantanana ny firenena, ary ny fomba anaovan'ny fitondram-panjakana fitsipika sy ny lalàna. Fa ny politika koa dia hita ao amin'ny vondrona hafa, toa ny ao amin'ny orinasa lehibe, ny sekoly ny ny fiangonana.
== Governemanta ==
Ny governemanta dia miezaka ny hitarika ny vondrona manontolo. Ny fitondram-panjakana diamanaodia manao zavatra toy ny:
* Manapa-kevitra mikasika ireo olona mahazo tapa-tany
* Manapa-kevitra mikasika ny olona afaka milaza ny olon-kafa ny zavatra tokony hatao Manapa-kevitra na handeha hiady amin'ny firenena hafa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/958093"